Mudaharaadayaasha Suudaan: oo dalbanaya in ladhiso dowlad rayid ah oo kumeel gaar ah – Walaal24 Newss
Mudaharaadayaasha ayaa sheegay iney ku sii sugnaanayaan waddooyinka waaweyn ee magaalada Khartoum, tillaabbada cusub ee ay mudaharaadayaashu ku dhawaaqeen ayaa imaneysa laba maalmood kaddib marki ay ciidamada Suudaan ay xilka kala wareegeen Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir.
Waxayna mudaharaadayaashu dalbanayaan in si degdeg dowlad rayid ah oo ku meel gaar ah loo dhiso oo ay ciidamadana xilka wareejiyaan.
Dadka ayaa wali saluugsan tallaabadii ay shalay milatariga Suudaan xilka ugala waregeen Madaxweynihii hore cumar Al-Bashiir isla markaana xabsiga ku dhigeen.
Wasiirka gaashaan dhigga ahna Madaxweyne ku xigeen Cawad Ibnu Cawf ayaa ku dhawaaqay in maamulka ay la wareegeen milatariga oo muddo 2 sano ah gacanta ku heyn doona.
Arrintan ayaa waxaa ka biyo diiday dibadbaxayaashii inay isaga tagaan waddooyinka iyagoo sheegay in hogaamiyaha afgambigu ay aad isugu dhaw yihiin Madaxweynihii xilka ka dagay ee Al-Bashiir.
Wasiirka Gaashaandhigga Cawad ibnu Cowf ayaa ku dhawaaqay in uu is casilay, go’aankiisa waxa uu kaga dhawaaqay taleefishinka qaranka, isagoo xilkana ku wareejiyay Cabdulfataax Burhaan oo ah hogaamiye kale oo milateriga ka tirsan.
Laakiin taas ayaa loo arkay arrin isku dhiib dhiib ah, aan waxba ka duwaneyn xukuumaddii hore ee Al-Bashiir, oo iyada qudheeda ahayd mid milatari.
Waxaana sida oo kale xilkiisii iska casilay madaxa sirdoonka dalkaasi Generaal Salax Goosh, iscasilaadiisa waxay timid saacada un kaddib marki uu sargaalka ciidamada xilka Suudaan la wareegay hoggaaminayey oo ahaa wasiirka gaashaan dhigga Cawad Ibnu Cawf uu xilka iska casilay. Isaga oo aan sheegin sababta uu iisu casilay.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Sudan Congress Omar el-Digeir, wuxuu sheegay “iney ciidamadu noqon kuwa awoodda dalka isku dhajiya”.
Dowladda Soomaliya “Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM in aan Wadanka laga rabin kana shaqeyn karin”
Haweeney ka howlgaleysay Hay’ad gargaar oo afduubtay loogu geystay Dalka Kenya
War-murtiyeed ay soo saareen Maamulada Puntland iyo Galmudug kana soo horjeesteen sadax Sharci…….
Madaxweynaha Mareykanka oo caawa jeedin doona khudbaddiisa labaad ee “Qaranka”